Unofanirwa Kugadzirisa Zvemukati meWide Screens? | Martech Zone
Unofanirwa Kugadzirisa Zvemukati meWide Screens?
Chitatu, Ndira 30, 2013 Svondo, Kurume 24, 2013 Douglas Karr
Ndinoda ruzivo rwemushandisi ruzivo rwekuti chime mune ino positi. Ndanga ndichitarisa sekuwedzera uye nzvimbo dzeetekinoroji dziri kuwedzera nzvimbo yekutarisisa (iyo inoonekwa nharaunda yechigadzirwa chako) uye handisi izvo chaizvo zvakafadza. Ini handitende izvozvo, kana iwe uine imwe resolution yekuti iwe unofanirwa kushandisa iyo resolution.
Heano kuputsika kwesarudzo dzepamusoro pa Martech Zone:
Chisarudzo chakakurumbira, sezvaungaona, ndiyo 1366 × 768. Izvi zvakaringana zvakajairika resolution yedare remusika pamusika izvozvi. Zvakaenzana, aya ndiwo maratidziro anoita skrini.
Sezvauri kuona iyo skrini iri kwazvo, yakafara uye yakapfupika. Ipo ichiitira iyo hombe skrini yakagadziridzwa kuona HD mavhidhiyo, haisi chaizvo skrini yakagadziridzwa kune mawebhusaiti uye kuverenga. Uye isu tinoona mavhidhiyo ari kure ... kwete kumusoro padhuze kwatinoverenga zvinyorwa uye kutaipa pabhodhi. Screen yakatwasuka ingave iri nani resolution yacho, nekuti mawebhusaiti anosiyana pakureba kupfuura zvaanoita nehupamhi.
Nekudaro, ndiri kuona kupokana kwemawebhusaiti akagadzirirwa kuwedzera nzvimbo yekutarisisa uye ini handina kutengeswa. Mapepanhau akawana kare kare kuti vanhu vaiverenga mumitsara yakatwasuka, kwete marefu akarereka. Pfungwa dzedu dzinowanzorasika apo patinenge tichifamba kuyera. Kufambisa zvinhu kure kuruboshwe, kana kurudyi kunovaisa kunze kwekutarisa pandinoverenga zvemukati, saka zvechipiri zvinhu zvakaita semabhara epadivi hazviteererwe zvachose.
Nezvo, ini handisi kutarisa kuti ndigadzirisezve Martech Zone screen kutora iyo yakatwasuka real estate chero nguva munguva pfupi. Dhizaini yedu pane yekutarisisa inosiyana nezvinoitika pane mbozhanhare kana piritsi uye isu ticharamba tichichengeta izvo zviitiko zvakasarudzika. Hupamhi hwedu pane bhurogu hwakanaka pakuverenga kumusoro kusvika pasi uye nekuona padivi apo isu tichiona izvo zvakakosha zvemukati. Yedu yekutanga yezvinyorwa ndeye 640px yakafara kuti tiwane zvakajairika vhidhiyo saizi uye yepadivi iri 300px yakafara kune yakajairwa kushambadzira.
Unofungei? Tinofanira kuenda nenzira yemamwe masaiti? Kana kuti ndiri munzira chaiyo nemamiriro edu azvino?
Tags: 1024x7681366x768patanihd yekutarisayakakura yekutarisatarisisatarisa zvisarudzokuongorora hukurumazanoTechviewportyakafara yekutarisa
Nei Mapurogiramu Ekushandisa Akasiyana
Ndira 31, 2013 na7: 39 PM
Handikwanise kutaura kuti ndiri ruzivo rwevashandisi, zvisinei ndanga ndichivaka masayiti kwenguva yakareba, uye ndiri kusundira munhu wese zvakaoma kuti agadzire dhizaini, kana kungo tarisa matambudziko iwe kutarisana.
Kana iwe ukatarisa kune saiti senge Mashable, The Verge, uye kunyangwe NPR, iwe unogona kutaura kuti ivo vakachinjira kune yakafararira dhizaini sezvawataura izvo ini pachezvangu NDINODA, apo ini ndinoshanda uye ndichiverenga zvakawanda zvangu zvine chekuita nebasa zvine chekuita pa 32-skrini.
Nekudaro, mumaonero angu kana zvasvika kune saiti senge yako, ndinofanirwa kushamisika kuti chii chakabairwa uye rudzii rwebhajeti iwe yauchazoda kushandura.
Iyo yekuvandudza mukati mangu yaikurudzira kuyedzwa nemamwe mapurani dhizaini pane zvimwe zvirimo, uye kushandisa kuendesa kune yakatarwa nzvimbo yekutarisisa, wozoenda uchibva ipapo.
Ini ndinoona kuti nemasaiti senge Verge uye Mashable, chidimbu chakakura chaizvo chinoda huwandu hwenzvimbo, uye dhizaini yakafara inobatsira izvozvo pamwe chete.
Ndira 31, 2013 na9: 46 PM
Kutenda neiyi njere huru, Doug! Isu zvirokwazvo tingaise mari kana paine humbowo hwekuti hwakawanda, mafomati anodavirira ari kuvandudza kuverenga nekuita pamasaiti. Pane humbowo chaihwo hweizvi kunze uko?